Yaa dhalay wiilka loo heysto dilka xildhibanka Britishka ah? – Radio Damal
Qalabka Warbaahinta Britain iyo ilo wareedyo u dhaw hey’adaha amaniga ee kiiskaan baaraya ayaa sheegay, in Cali Xarbi Cali ay xireen booliska Britain kuwaasoo xarigiisa u adeegsaday xeerarka ka dhanka ah argagixisada.
Cali ayaa ah qofka kaliya ee u xiran dilka xildhibaan Amess oo 69 jir ahaa, kaasoo Jimcihii lagu dilay toorray xilli uu bariga magaalada London kula hadlayay dadka isaga soo doortay.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reueters, Harbi Ali Kullane, wuxuu u xaqiijiyay wargeyska Sunday Times ee dalka Ingiriiska, in wiilkiisa Cali Xarbi loo xiray arrimo la xiriira dil.
E-mail uu ugu soo jawaabay su’aal ay wakaaladda wararka Reuters ka weydisay arrimahaan, ayuuXarbi Cali Kullane ugu jawaabay in xilligan gaarka ah ay ku jiraan xaalad laga naxo oo aysan horay arag, sidaasi daraadeedna uusan diyaar u aheyn inuu ka hadlo sababo la xiriira baaritaanka oo billow ah.